El mal de Corcira: chikamu chekupedzisira cheiyo Bevilacqua uye Chamorro saga | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Biography, Vanyori, Nhema nhema
Ibiza, imwe yenzvimbo dzeEl mal de Corcira
Zvakaipa Corcira inoverengeka nemunyori akakurumbira wechiSpanish Lorenzo Silva. Yakaburitswa muna Chikumi 2020, ndicho chitsva chiverengero mune yakadomwa nhevedzano Bevilacqua uye Chamorro. Kamwe zvakare, uye senguva dzose, munyori anodhinda zvakare mushure memakore maviri chitsauko chitsva chezvakateedzana chakatanga muna 1998. Kufanana neidzo dzakapfuura, irangano remhando yemutikitivha.
Silva areurura kuti aigara achida kutaura nyaya iyi, chinova chikwereti chaakazoripa nevaverengi vake. Mushure mekuburitsa basa rake, akati: “Mhedzisiro yacho ndiyo yakakura kwazvo uye pamwe ndiyo yakanyanya kuomesa hurukuro". Mune izvi, pamusoro pekugadzirisa mhosva, tinogona kudzidza zvakawanda nezve hudiki hwe protagonist uye zvaakaona seanopokana nemagandanga.
1 Pfupiso yaEl mal de Corcira
1.1 Nyaya nyowani
1.2 Kutanga zviratidzo
1.3 Nyaya dzakafanana
2 Kuongorora kwaEl mal de Corcira
2.1 Zvekutanga zvinyorwa zvebasa
2.2.3 Vamwe vatambi
2.3 Zvido zveEl mal de Corcira
2.3.1 Kugadzirira kwemunyori
3 Mifungo nezve El mal de Corcira
4 Nezve munyori, Lorenzo Silva
Pfupiso ye Zvakaipa Corcira
Vamiririri Rubén Bevilacqua -Vila- naVirginia Chamorro, vanozviwana mushure mekutapwa kwemamwe matsotsi. Pakati pehusiku ihwohwo, brigadista akakuvara uye akatumirwa kuchipatara. Ndichiri kupora, Vila anotambira nhare kubva kuna Lieutenant General Pereira, uyo anomupa imwe nyaya. Pamahombekombe muFormentera, murume akafa akaonekwa, akabvisa nguo dzake uye akakuvadzwa zvine utsinye.
Mushure mekubvunzurudza zvapupu zvinoverengeka munzvimbo iyi, pakutanga kupedzisa kuti inogona kunge iri mhosva yekuda. Izvi zvinodaro nekuti vazhinji vaiti vakaona akabatwa aine vamwe vechidiki mumakirabhu emuno muIbiza. Zvakare, aive aronga kusangana nemurume husiku ihwohwo kumahombekombe. Asi, zvese izvi fungidziro inochinja kana ivo vakwanisa kuwana kuzivikanwa kwemufi.
Iye ndiye Basque Igor López Etxebarri, aimbova nhengo yeETA bhendi, akapedza nguva refu ari mutirongo kuMadrid. Nekuda kweiyi kumashure, iwo wepamusoro murairo unopa Vila kuferefetwa kwekuuraya. Kuti aite izvi, anofanirwa kuenda kuGuipúzcoa, dunhu raigara López Etxebarri, nzvimbo inozivikanwa nemutungamiriri wechipiri kwemakumi emakore.
Zvakaipa zveCorcira: 1503 ...
Munguva yekuferefeta, anoenda kuburikidza nezvitsauko zvakawanda zvehupenyu -Munhu uye basa-- yevafi, kuitira kujekesa kuuraya. Panguva imwecheteyo, Vila anoyeuka mavambo ayo muIntxaurrondo barracks, paakarwa nehugandanga. Mumiriri anotora rwendo rwekudzoka nenguva nekurangarira kugadzirira kwese kwavakawana kwekuvhiya uye idzo nguva dzakaomarara mukuita.
Iyi ndiyo nzira iyo nyaya inoitika, pakati peyakaitika uye yazvino zviitiko zveane hushingi protagonist. Zvirongwa zvinoverengeka zvinotsanangurwa, pakati pavo, nguva dzakaoma muSpain nekuda kwekurwiswa kweETA, uye kuti Vila, ane makore makumi maviri nematanhatu chete, akakwanisa sei kutarisana navo zvine hukasha. Panguva imwecheteyo, brigadista inogadzirisa iyo isinganzwisisike kesi iyo yaakapihwa iye.
Analysis of Zvakaipa Corcira
Zvekutanga zvinyorwa zvebasa
Zvakaipa Corcira ingano ine mapeji makumi mashanu nemakumi mashanu, yakakamurwa kuita Zvitsauko 30 uye epilogue. Zano rinoitika munzvimbo mbiri: kutanga kuSpanish chitsuwa cheIbiza, Formentera, wozotamira kuGuipúzcoa. Iyo nyaya inotaurirwa mumunhu wekutanga nemutambi wayo, nerondedzero dzine udzame uye dzakarurama.
Ndiye mutambi mukuru wenyaya dzakateedzana, murume ane makore makumi mashanu nemana ekuberekwa ane degree rezvepfungwa, uyo anoshanda semutungamiriri wechipiri muCivil Guard. Iye ndeweCentral Operational Unit, boka revakuru kugadzirisa mhosva. Iye anonzwisisa, anocherekedza uye anomiririra mumiririri, asingarasikirwe neruzivo.
Ndiye akabatwa nenyaya yakapihwa Vila, murume uyu anobva kuBasque Nyika uye Akanga ari mubatsiri weboka reETA. Nekuda kwezvaakaita, akavharirwa makore gumi mutirongo reFrancia neAlcalá Meco kuMadrid. Nekuda kwekurambwa kwevezera rake, akavanza maitiro ake epabonde kwemakore mazhinji.
Muchikamu chino, Vila achange aine Álamo seshamwari - mumiriri anozvidza uye asina hanya--, sezvo mumwe wake wemapurisa ari pazororo. Kunyangwe Chamorro ichinge isingaite zvizere, Vila anogara achichengetedza kutaurirana naye parunhare. Kumwe kutora chikamu kwakatanhamara ndekweBrigadista Ruano, nyanzvi yepamusoro uye ine hunyanzvi hwekugadzira.
Curiosities of Zvakaipa Corcira
Silva aive nenyaya iyi mupfungwa kubvira saga yakatanga muma90s.. Nechikonzero ichi, yakaita ongororo yakaoma pamusoro pehugandanga kwemakumi emakore. Iyo inyaya yakaoma kubata, sezvo boka remagandanga ETA rakakonzera kukuvara kuzhinji kuvanhu uye neVarindi veVanhu. Kamwe bhendi raputswa, munyori akakwanisa kuunganidza zvipupuriro kubva kuvamiriri nevanhuwo zvavo vakapona panguva iyoyo.
Mukukurukurirana na XL Vhiki nevhiki, Silva akataura: "Kusvika ETA yakundwa, Civil Guard haina kuburitsa chitsidzo. Kwete kunyange ini. Uye ikozvino vandiudza zvese nerupo rukuru ”. Munyori akakumikidza zvitsauko gumi zvebhuku kuchinhu ichi chisina kusimba, achishandisa zvakaitika kumumiriri Bevilacqua, kwake kurwisa kwemagandanga kurwisa uye kukunda kwake.
Opinions on Zvakaipa Corcira
Kubva kuvambwa kwayo mu2020, Zvakaipa Corcira yakagamuchirwa zvakanaka nevaverengi, avo vaimirira nechido chimwe chiitiko kubva kuvamiriri Bevilacqua neChamorra. Pawebhu inotaridzika nekugamuchirwa kunopfuura makumi manomwe neshanu%, pamwe nemazana ezvakanaka maonero. Pachikuva Amazon Iyo ine 1.591 ratings, iyo 53% yakaipa 5 nyeredzi uye 9% yakapa iyo 3 kana pasi.
Nezve munyori, Lorenzo Silva
Lorenzo Manuel Silva Amador Akazvarwa neChipiri, Chikumi 7, 1966 muwadhi yekuzvitakura yechipatara chemauto cheGómez Ulla, chiri muguta reMadrid (pakati peruwa rweLatina neCarabanchel). Mumakore ake ekutanga, aigara kuCuatro Vientos, padyo neguta rekumusha kwake. Gare gare, aigara mune mamwe maguta eMadrid, akadai seGetafe.
Akapedza gweta kubva kuComplutense University yeMadrid uye akashanda kwemakore gumi (10-1992) muboka rebhizinesi reSpanish Union Fenosa. Muna 1980 akatanga kutamba nemabhuku, akanyora nyaya dzinoverengeka, zvinyorwa, mabhuku enhetembo, pakati pevamwe. Muna 1995, akapa runyorwa rwake rwekutanga: Mbudzi isina violets, rakateverwa gore rakatevera na Icho chinhu chemukati (1996).
Muna 1997 iyo Nostalgia trilogy na: Kuneta kwevaBolshevik, rondedzero yakashandisirwa bhaisikopo muna 2003 ine chinyorwa nemunyori pamwe naManuel Martin Cuenca. Muna 2000 akapa rimwe remabasa ake akakurisa: Iye asingashiviriri alchemist, yechipiri chikamu cheiyi akateedzana Bevilacqua uye Chamorro. Iyi nhoroondo yakagamuchira mubairo waNadal gore rimwe chetero.
Mu 2012, yakabudiswa Mucherechedzo wemeridian -saga Bevilacqua uye Chamorro—, rondedzero yakahwina mubairo wePlaneta (2012). Iyi yakabudirira nhevedzano yatove nemabhuku gumi, yekupedzisira acho ari Zvakaipa Corcira (2020). Nezvo, munyori akavaka rakasimba basa rekunyora, aine anopfuura makumi matatu enganonyorwa akashandurwa mumitauro gumi nemaviri, uye iyo yakasvitsa nayo mamirioni avaravi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Zvakaipa Corcira
Nyamavhuvhu. Kusarudzwa kwemashoko ekugadzirisa